Maniiwwan misoomaa milkeessuuf hanqinootni gahumsa humna namaa furamuu akka qaban ibsame
Dhimmoota bara 2030 keessatti maniiwwan misooma waaraa karoorfaman dhugoomsuuf hanqinaaleen gahumsa humna namaarratti mul’achaa jiran hatattamaan furamuu akka qaban Mootummoota Gamtoomaniitti Dippaartimantiin Dhimmoota Hawaasummaafi Dinagdee ibse.
Gorsaan dippaartimantichaa, Obbo Maandafroo Nigusee Roobii darbe workishooppii tooftaalee maniiwwan misooma waaraa itti milkeessuun danda’amurratti yaada dhiyeessaniin akka jedhanitti, dhimmoota bara 2030 akka waliigalaatti galmaan gahuuf biyyoota addunyaatiin qabamuun hojjetamaa jiran qabiyyeensaanii bal’aa waan ta’eef, tooftaalee bilchina qaban kan barbaadaniidha. Kunimmoo gahumsa humna namaa waliin kallachumaan waan walqabatuuf rakkoolee gama kanaan jiran furuun barbaachisaa ta’uusaa himaniiru.
Akka Mootummoota Gamtoomaniittis irra jireessaan tooftaaleen shan qorannootiin kan adda bahan yoo ta’u, isaanis qaamota dhimmi ilaallatu sirnaan adda baasuun yeroo yerootti cimsuu, hariiroo gama hundaanuu uumuu(linkage), hojiilee mul’achuu danda’an hojjechuuf hawaasa hirmaachisuu, wantoota dursi kennamuufii qabanirratti irra jalaan hojjechuufi yeroo yerootti raawwii hojiilee sakatta’uun duub-deebii kennuufaa akka ta’an eeraniiru. Tooftaalee kanneen hojiirra oolchuufis wayita addaddaatti sadarkaa hundatti ogeessota waajjiraalee mootummaa gariif leenjii kennaa turuusaanii yaadatanii, ammas ittifufiinsaan kennamaa jiraachuu dubbataniiru.
Keessumaa pirojektota meegaa sektaroota bishaanii, jallisiifi elektirikii waliin walqabatanii jiran xumuramuun hawaasa biyyattii akka fayyadaniif xiyyeeffannoon kennamee akka jirus ibsaniiru.
Ministirri Ministeera Bishaanii, Jallisiifi Elektirikii Doktar Silashii Baqqalaas workishoopicharratti haasaa taasisaniin, Itoophiyaan dhimmoota bara 2030 keessatti karoorfaman guutummaatti dhugoomsuuf waliigaluun kan mallatteessite ta’uushee yaadatanii, wayita ammaas haala itti fufiinsa qabuun keessuma sektaroota kanneen keessatti hojjetamaa jiraa jedhaniiru. Kunis, hanga ammaatti gama bishaan dhugaatii walgeessisuuf, qulqullina dhuunfaa eegsisuufi itti fayyadama humna ibsaa babal’isuuf hojiileen hojjetamaa jiran kan nama jajjabeessan ta’uus dubbataniiru.
Haa ta’u malee, karoora kanneen haalaan hojiitti hiikuuf rakkooleen hedduu jiraachuu himanii, keessumaa ammoo hanqinaaleen dandeettiifi gahumsa humna namaarratti mul’achaa jiran yerootiin furamuu qabuu jedhaniiru. Kana gochuuf ammoo mootummaa cinatti dhaabbileen mootummoota gamtoomaniifi jaarmiyaaleen adda addaa qindoominaan deggaraa yoo jiraniyyuu hanga isaanirraa barbaadamu hinhojjennee jedhaniiru. Kanaafis, hunduu tumsuu akka qaban yaadachiisanii, ogeessotni waajjiraalee mootummaas carraa argame maraatti fayyadamanii dandeettiifi gahumsasaanii fooyyeffachuu akka qabanis dubbataniiru.
Workishooppii qophaa’e kanarratti ogeessotni Mootummoota Gamtoomaniifi Ministeera Bishaanii, Jallisiifi Elektirikii 200 ta’an kanirratti hirmaatan yoo ta’u, sadarkaa Itoophiyaatti tooftaalee maniiwwan misooma waaraa dhugoomsuun danda’umarratti bal’inaan muuxannoofi marii taasisuun kan goolabamuudha.
Torban kana/This_Week 33762
Guyyaa mara/All_Days 1625557